I-Anchor kwi-St-Lauren River CITQ: 296442
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguCara
Wamkelekile kwikhaya lethu, le ndlu igcwele imbali eyakhiwa ngo-1901, abantu balapha bayibiza ngokuba yiMaison Brunelle. Xa sijonge kuMlambo wethu omangalisayo iSt. Lawrence, kukho ukutshona kwelanga nokuphuma kwelanga okumangalisayo. Uyakwazi ukubona iilayini zihamba. Ifumaneka kwindawo esondeleleneyo ye-15,000 yesikwere indawo, emva kwayo yintsimi kunye nefama apho unokuva khona izilwanyana. Unethala kunye ne-spa ngaphandle. igumbi Billiard. I-wifi egqwesileyo engenamkhawulo.
Indlu yonke iyafumaneka kuwe. ikhitshi, igumbi lokuhlambela, indawo yokudlala, igumbi lokuhlala, amagumbi okulala ama-5, i-spa, i-terrace kunye nomhlaba. Zonke izixhobo zingumatshini we-espresso, umatshini we-nespresso. BBq. I-oveni yeRaclette, ifondue yaseTshayina, ifondue yetshokolethi. Netflix kunye nentambo eqhelekileyo. i-wifi egqwesileyo. Umdlalo wabantwana, ibhedi yomntwana, istroller, ukutshintsha itafile. Kukho nendawo yomlilo yeoli kwigumbi lebhiliyoni.
Usentliziyweni yelali yaseBastican. Umda weSt-Laurent kunye namaphandle (ifama). Indlu ibekwe kwindlela yembali yendlela yenkosi. Imizuzu engama-20 ukusuka eTrois-Rivière. Imizuzu engama-45 ukusuka kwisiXeko saseQuebec. 1:20 ukusuka kwisixeko saseMontreal. Isikhephe okanye elinye inqanaba lokumisa umsebenzi wezandla. Inqwelo yekhephu kunye nendlela yebhayisekile yentaba kufutshane, bona imephu. Umda lunxweme oluhle lwesanti apho ukuqubha kuvumelekileyo. Kukho iLa Mauricie National Park kwimizuzu eli-15 ukusuka apho ukuhamba, ukukhwela ikhephu kunye nokutyibiliza ekhephini yiparadesi. Ukuzikha iapile kwindlela yenkosi. Ebusika ukusuka ngoDisemba ukuya ekupheleni kukaFebruwari ngemizuzu eyi-10 ukuloba iintlanzi ezintle kumatshaneli ngokungenakuphoswa !!!
Ewe akukho ngxaki ungandifumana ngetekisi nanini na !!! Nceda unditsalele umnxeba ngexesha likaxakeka
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Batiscan